निर्भीक राई – मझेरी डट कम
जाँदो १४ कातिक बिहान टिभिको स्कोलिङ न्युजमा स्रष्टा जगदीश घिमिरे बितेको खबरमा मेरो नजर प¥यो । साहित्यमा पूर्णकालीन रुपमा मैले खुर धसेको ७ वर्ष टेक्नु लाग्दा रुचाएको स्रष्टा नबितेकोले स्रष्टाको मलामीमा जुट्ने मेरो धोको अपूरो थियो । उनको ‘अन्तर्मनको यात्रा’ र ‘सिर्जनामर्म र उँट’ लेखले म उनीबाट पट्टिनुको बाबजूद उक्त धोको पूरा गर्ने कुराले म दोधारमा रेटिनु थालेँ । जसको कारणहरु यी थिए— उनी माइलोमाले थलिएर ‘अन्तर्मनको यात्रा’ मा उनले प्रलाप गरेपछि उनलाई अनावश्यक धेर टिठ्याइयो भन्ने मैले तर्क ठड्याउनु, उनको आयु ४ वर्ष मात्र बाँकी रहेको जानकारी चिकित्सकले दिएकोमा त्यो अवधि नाघेकोले उनीप्रतिको मेरो सहानुभूतिको पारो घट्नु, उनले ‘अन्र्तमनको यात्रा’ को पृष्ठसङ्ख्या ३ मा यी पङ्तिहरुमा हरेस गनगनाउँदै सुस्केरा फुक्नु— “ब्यङ्ककको तीनजना प्रतिष्ठित विशेषज्ञहरुले मेरोजस्तै स्वास्थ्यसूचक भएका माइलोमारोगीहरुको औसत आयु ३—४ वर्ष हुन्छ भने ।
कवितावाचनको पहिलो निमेक
(किरातराई लेखकसङ्घको दोस्रो स्थापनादिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कवितागोष्ठी तथा सम्मानकार्यक्रम)
प्रज्ञा भवनको सानो हलमा उक्लिएँ । मैले वाचन गर्ने कविता किरातराई लेखक सङ्घको अध्यक्ष राजन मुकारुङलाई थम्याएँ । वाचन गर्न नपाओस् भनी नेपाली रुपान्तरचाहिँ उनले छुट्टै राखे । शुद्ध बुङ्लावा भाषामा मात्र वाचन गर्नु पर्ने (नेपालीमा अर्थ खुलाउन नपाइने) आचारसंहिता उनले जारी गरे । नेपाली रुपान्तर मैले फिर्ता माग्दा छाप्नुलाई जरुरी भएको उनले ठानी फिर्ता दिनु इनकारे ।
आँखा रसाउनु सर्जकको एउटा लक्षण (‘समय रक्तस्नान गरिरहेछ’ लोकार्पणसमारोह)
जाँदो वैशाख ११ बिहान दिनेशविक्रम थापाले आफ्नो प्रथम कवितासङ्ग्रह ‘समय रक्तस्नान गरिरहेछ’ को लोकार्पणमा उपस्थित हुन खबर गर्दा नागर्जुनडाँडा घुम्न जाने कार्यक्रमलाई मैले रद्ध गरेँ ।
दिनेशविक्रमबाट मन्न्तव्य गयो, “सानैबाट पालेको रहर पूरा हुँदैछ । विशेष गरी मेरो साइँलादाजुको हात छ, म साहित्य तर्फ लाग्नुमा । जीवन सङ्गिनीको निधनले मलाई कविता लेखनतिर तान्यो । मेरी छोरी कविताको पनि प्रेरणा ।
‘साहित्यसन्ध्या’ अरु बेलाभन्दा बाक्लो उपस्थितिबीच क्लिीप माइक्रोफोनबाट फुकिएका कुराहरू कुसुम ज्ञवालीबाट ल्यापटपमा रिकर्डिङ हुँदै सञ्चालन भइरहेको ।
सुमी लोहनीले ‘मधुश्री,’ मिश्र उमाले ‘हातमा माला लिएर,’ टङ्क उप्रेतीले ‘डुङ्गा,’ सूर्य सुवेदीले ‘उधारो शुभकामना,’ मोहन दुवालले ‘नयाँ वर्ष’, प्रशान्त खरेलले ‘प्रतिबद्धता र यथार्थता’, ईश्वर श्रेष्ठले ‘बाग्मती,’ भारद्वज मित्रले ‘शुभकामना,’ नारायण निराशीले वसन्ततिलक छन्दमा ‘शुभकामना’, कविता, नरेश शाक्यले ‘मुक्तकहरू’, (उनको वाचनको बेला ताली पड्किएको) र धनबहादुर मगरले गीत सुनाए ।
मेरो थाङ्ने बातले रसिकको भात हिउँ (सास रहन्जेल आस रहने)
गायक, सङ्गीतकार तथा साहित्यकार गणेश रसिकको र मेरो राजनीतिक आस्था उत्तरदक्षिण जस्तो विपरीत भए पनि नेपालमा जन्मीहुर्की साहित्यसाधनामा घोटिएको किरात राई जातिमा मेरो लागि उनी सबभन्दा (उमेर र कृतिले) जेठो र सम्मानित व्यक्तित्व हुन् । त्यसैले समको १०६ औँ जन्मजयन्ती सिद्धिएपछि उनको नक्सालस्थित डेरातिर हानिएँ ।
उनको बैठककोठामा पसी मैले बोकेको खाजा लिनु निमेषसँग मैले चम्चा मागेँ । भाउजूसँग घरायसी गफ जोत्न थालेँ ।
मैले अनेक उपाय खोज्दा पनि म असफलतामा पछारिइरहेको ।
पहिलो हेराइमा तिम्रो रुपले लट्ठ्याएको नशाबाट म बाैिरनु नसकेको ।
तिम्रो एकतर्फी प्रेममा समर्पित हुँदा म खुस्किएको ।
जुन समर्पणबाट शहीदलेजस्तो इज्जत मैले पाउनुको साटो
‘कात्तिके कुकुर वा देउते बोको’ को सम्बोधनबाट म अपमानित हुनु सक्ने ।
मार्क्सवादको एउटा असल पक्ष – ‘प्रतिभाप्रवाह’ शृङ्खला ६० औँ
त्रिचन्द्र कलेजको पुरानो भवनको तेस्रो तलाको कौसीमा सहभागीहरू पर्खिरहेको । जाँदो असोज-कात्तिकको अन्तिम शनिवार उक्त कार्यक्रम हुन नसक्नुमा दसैँतिहारको अनावश्यक लामो बिदाको कारण जिम्मेवार भएको प्रसङ्ग संयोजक हरिगोविन्द लुइँटेल र खेम थपलियाबीच चल्यो ।
मैले बोलेँ, “असोजअन्तिम हप्ताको शनिवार कविता भन्ने तोडले म यहाँ बड्किएर आ’को । चालचुल न भा’कोले हिस्सिएर फर्केँ । बूढियाले भनी – मान्छेलाई दसैँ लागेर घटस्थापनादेखि राजधानी छाडिसके तपाईँलाई चैँ खाइ न पाइ कविता सुनाउने चासो ।”
राजपरिवारले ढलीमली गर्ने राजदरबारको साटो
सर्वसाधारणको खुट्टाहरूले टेक्ने र आँखाहरू डुल्ने
सङ्ग्रहालयमा परिणत भएकोमा
नारायणहिटीको टावर गर्वले शिर ठाडो पारिरहेको ।
नारायणहिटीदरबार सङ्ग्रहालयको प्रत्येक चीज
शताब्दीयौँ अघिबाट राजसंस्थाले रैती चुसेको दसी भएको ।
देवकोटाको सम्झनामा भएको कवितागोष्ठीमा देवकोटाकै बारे लेखिएको (त्यसमा पनि ‘गरिमा’ जस्तो नेपाली साहित्यिक पत्रिकाको सर्वोच्च पत्रिकामा छापिएको) ताजा कविता वाचन गर्ने मौका निस्सै पाइन्छ भन्ने आशाले म सुरिइरहेको ।
चाइनिज जिनको ब्राउन रङको पात्लो ज्याकेटमाथि साङ्लो भिरेँ । हिपहप पत्लुन, बुट आदिमा तयार परेँ । कानमा नीलो पत्थरको इयरङि झुन्ड्याएँ ।
२०३३ सालमा मेरो कविता ‘एउटा पुजारीको सुझाव मन्दिरको देवीलाई’ महाराजगन्ज क्याम्पसको मुख-पत्र ‘अङ्कुर’ मा उत्रिएको सबभन्दा पहिलो (ऐतिहासिक घटना) भएता पनि म पोक्किनँ । किनकि कविता पेस्ने सबै विद्यार्थीहरूको कविताहरू स्वतः त्यहाँ उत्रिएको थियो । २०४३ सालमा मेरो अर्को कविता ‘मेरो हेराइको मतलब’ हेटौडाबाट प्रकाशित प्रगतिशील साहित्यिक पत्रिका ‘प्रयास’ मा उत्रिँदा खुब रमाएँ । तर मेरो शब्दहरू बदाल्दिएकोले त्यतिखेर म रिसाएँ पनि ।
बाडिगार्डसहित भित्रिएका शिक्षामन्त्री प्रदीप नेपाल सोझै मञ्चमा चढेर सगोलमा नमस्कार टक्र्याए ।
उनको ‘मुक्त आकाशको खोजी’, ‘खुइते कडेरिया’, ‘नओइलिने फूल’ र पत्रिकामा उत्रिएका संस्मरणहरू सङ्खुवासभाको २०४१ सालतिर वाना बसाइमा मैले पिएको । ६० वर्षपछि राजनीतिबाट सन्यास लिएर साहित्यमा पूरा समय दिने उनको विचारले त्यसप्रतिको उनको कामुकता (समर्पण) व्यक्त हुँदैन । जागिरबाट अवकाश हुने जागिरे साहित्यकार साहित्यमा होमिन खोजे जस्तै त्यो हो ।
मोर्निङ स्टार स्कुलको कम्पाउन्डमा भटभटे पसाएँ । मान्छेको जमघट सुरु । “रुसीसांस्कृतिक केन्द्रको कार्यक्रममा पनि तपाईँ हुनुहुन्थ्यो,” इन्दिरा अर्यालले दाबी राखिन् ।
“म नै हो त पक्कै ?” मैले मुस्काउँदै भनेँ ।
“तपाईँ नै हो ।”
मेरो जीउमा बेरिएको साङ्लोको झुत्ता देखाउँदै मैले सोधेँ, “यही साङ्लोले ख्याल गर्नु भा’को होला ह कि ?”
घर अगाडिपछाडि ४-४ आना जत्ति चउर, तीन आना जत्तिमा माटोले लगाइको इँटको गारोमा ठडिएको ४ तले घर कर्कट पाताको छानामुनि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कर्मघर ओतिएको । त्यसको झ्यालढोकाहरू देख्दा हाम्रो गाँउको गढीगाउँका बस्नेत मुखियाहरूको घरको झल्को दिने । अनेक चासो उर्लिरहेको मनसँगै त्यो घरमा म पहिलो दफा भित्रिँदै थिएँ ।
त्यहाँ भएका लुम्रेझुम्रे मान्छेहरूलाई देवकोटाको सन्तान ठान्दै म खिन्न हुँदै थिएँ । तिनीहरू डेरावालाहरू भएको कुरा पछि थाहा भयो । देवकोटाको निजी कोठा, त्यहाँ भएको खाट, टेबल, कुर्सी, दराज, पुस्तकको चाङ, निजी सामान र लुगाफाटा हेर्ने कुतूहलसँगै काठको भर्याङ उक्लँदै थिएँ ।
उक्त कार्यक्रमका आयोजकहरू जगत नवोदित र किसन राईसँग चिनाजाना साट्यौँ । बृटिशसेनामा कार्यरत लाहुरेहरूको पहलमा उक्त संस्था गठन र सञ्चालन भएको रहेछ । आर्मीम्यानले अत्याधिक समय बन्दुक र गोलीगट्ठा खेलाउनु, खेलकुद र नाचगानमा बिताउँछ । तर त्यस्तो दैनिकी, सङ्गत र परिवेशको बावजूद साहित्यजस्तो ओथ्रे (जो कोठाको सीमित घेरामा कुँजिएर गरिने) काम रुचाएको बुझ्दा मैले अनौठो मानेँ र गर्वले म फुलिएँ । अचेलका पल्टनेहरू पल्टने जीवनमा सैनिक तालिम, काम, खेलकुद र नाचगानमा प्रतिभा देखाएर फुली भिर्न र स्टरलिङ पौन्ड कमाएर पहराजस्तो मुन्डा घर ठड्याउन मात्र लालायित र सीमित छैनन् र उनीहरू पैसा तुलाउने वा भौतिक उन्नतिको सेखी गर्ने मात्र नभएर अस्तित्व र अमरताप्रति पनि लालायित छन् । जिन्दगीको अर्थ र जिम्मेवारी खोज्ने क्रममा लाहुरेहरूमा उब्जिएको यो सोच मजस्तो अस्तित्ववादी र अमरताको लोभीले सर्काउनु चुकिनँ । उनीहरू यस्तो हुनुमा अचेल शिक्षित केटाहरू भर्ती हुनाले पनि हो ।
(भोजपुरे स्रष्टासम्मान, प्रतिभा पुरस्कारवितरण एवं काङ्माङ नरेशको कविताकृति ‘अनुहारमा लुकाइएका चोटहरू’ लोकार्पण)
विप्लव ढकालले सम्मानित स्रष्टाहरूबारे र पुरस्कृत स्रष्टाबारे उजाले, ”पूर्णप्रकाश नेपाल ‘यात्री’ ले ३ दर्जन जत्ति अनुसन्धमात्मक कृति दिए । नेपाली भाषामा सबभन्दा ठूलो महाकाव्य ‘सिजापतिवाला’ उहाँले नै रचना गरे । परशु प्रधानले आख्यान साहित्यमा २ दर्जन जत्ति कृतिहरू रचना गरी मूर्धन्य स्रष्टा बन्न सके । ७ सालपछि साहित्यलाई उहाँले सशक्त ढङ्गले बढाए । नयाँ धारको लेखनलाई स्थापना गर्न सक्षम परशु प्रधानलाई सम्मानित गरी उक्त संस्था आफै सम्मानित भएको छ । श्रवण मुकारुङ (भोजपुरे स्रष्टाप्रतिभा पुरस्कारबाट पुरस्कृत स्रष्टा) जो वर्तमान नेपाली साहित्यमा अति चर्चित, लोकप्रिय हुनु हुन्छ । जसले ‘बिसे नगर्चीको बयान’ लेखी जनआन्दोलनलाई थप उर्जा थपे, । जसबाट कविताको शक्ति प्रदर्शन भएको छ । उहाँले जागिर खानु भएन अर्थात आफ्नो स्वाभिमानलाई झुकाएर आफ्नो प्रमाणपत्र कसैको जुत्तामा राखी बिन्ती गर्नु भएन, व्यापार गर्नु भएन । उहाँजस्तो साहित्यमा केन्द्रित भएको स्रष्टालाई राज्यले हेर्नु पर्छ कि पर्दैन ? उहाँजस्तो व्यक्तित्व राज्यलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? यी आजका जल्दोबल्दो सवालहरू हुन् ।”
जया जी !
तपाईँको ‘बेकरस्ट्रिटका दुई आँखा’ सँग एक दफा आँखा जुझ्दाको असरहरू (पाठकप्रतिकृया) कहने जाँगर चलाएको छु । तपाईँको निम्तो हुँदा-हुँदै उक्त कृतिको विमोचनमा उपस्थित हुन मैले नीच मारिसकेको थिएँ । किनकि म कथा बनाउँदिनँ (यद्यपि कथा पिउन मैले रुचाए पनि समय अभाव छ) र लन्डन बस्ने लाहुरेनीले फुर्सद र रहरमा बनाएको कथासङ्ग्रहको विमोचनमा वक्ताहरूले खास कुरा के बोल्लान् भन्ने मेरो पूर्वाग्रह वा उपेक्षा थियो । तर तपाईँसँग हेमखेम बढे मेरो भावी लन्डनयात्रामा तपाईँबाट साहित्यिक मदत पाइने आस, छिमेकी जिल्ला सङ्खुवासभा (भोजपुरपारि) को पुरानो वासी र पछि ससुरालीजिल्ला (झापा) वासी तथा स्वजाति महिला सर्जकको नाताले त्यस कार्यक्रममा जाने मन बनाएँ । जसले गर्दा तपाईँको रमाइलो कथाहरू पिउने अवसरदेखि मैले वञ्चित हुनु परेन ।
केही महिनाअघि वैरागी काइँलाको एकल कवितावाचन कार्यक्रम गुरुकुलले गर्न चाहे पनि उनी बिसन्चो भएकोले रद्ध हुँदा मैले विस्मात मानेँ । उनको कविताहरू ‘मफलर भए त मेरो माया’ र ‘मातेको मान्छेको भाषण’ पिउँदा, वैरागी काइँला हतपती कवितावाचन गर्दैन भन्ने कुरा मैले सुन्नु र ‘रेडियोसगरमाथा’ बाट प्रसारित उनको अन्तरवार्ता मैले कानमा थापी उनीसँग म पट्टिएकोले गुरुकुलसम्म पुग्ने मेरो जाँगर चल्यो । नत्र कविता सुन्नु पर्ने त्यहीमाथि नोटको पाती चढाई चढाई । कत्ति चित्त नबुझ्दो कुरा ! आफू कवि हुन बल गरिरहेको भए पनि कविता सुन्ने कुरा मेरो लागि पट्यार लाग्दो पनि हो । किनकि एकान्तमा निधार खुम्च्याएर, ध्यान गाड्दै दोहोर्याई-दोहोर्याई कविता पढ्दा त मलाई आनन्द मिल्दैन र म कविता बुझ्दिनँ । सरसरती पढिएको कवितामा ध्यान गाडिएर मजा पाउँनु मेरो लागि एकदम चर्को कुरा हो । म पूर्वाग्रही हुनु, कवितामा कहानी नहुँदा मेरो ध्यान नडोरिनु र म चेक्दा (लठुवा) श्रोता हुनु नै त्यसको कारणहरू म ठान्छु ।
गैरवामपन्थी गणतान्त्रिक नेता नरहरि आचार्यको मञ्चआसनले म व्यग्रताको साथ उनको मन्तव्यको पर्खाइमा थिएँ । उनले बताए, “पारिजातको साहित्य आफूले पढेको छु । तिनीसँगको सामीप्य नभए पनि लक्ष्मीप्रसादजस्तै तिनी प्रतिभाशाली थिइन् । लक्ष्मीप्रसादले मुनामदनबाहेक सबै कृति जलाए हुन्छ भने र पारिजातले चाहिँ ‘शिरीषको फूल’ च्यातिदिए हुन्छ भनिन् तर कुनै पनि कृति छापिएर सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई राख्ने वा मास्ने भन्ने अधिकार स्वतः पाठकमा रहने रहेछ अर्थात न ‘मुनामदन’ बाहेक देवकोटाको अन्य कृति जलाइए न पारिजातको ‘शिरीषको फूल’ नै च्यातिए ।”
पारिजातको ‘शिरीषको फूल’ को शून्यवाद वा निराशामा पाठकले आशा पाए भन्दै उनले भनिरहँदा केही थपडी पड्कियो । मेरो घैँटोमा घाम लागेकोले स्वस्फूर्त रुपमा मैले पनि रमाउँदै ताली ठोकेँ ।